Fiainan’ny fiangonana | FJKM Avaratr'Andohalo
Fiainan’ny fiangonana Manu_admin 2020-05-18T22:21:20+00:00
Hotanterahina ny fankalazana an’Andriamanitra, noho ny tsingerintaonam-panompoana, nataon’ny Mpitandrina ANDRIAMASINORO Fidimalala mivady teo amin’ny sahan’ny FJKM. Toy izao avy izany : Faha-30 taona maha Mpitandrina ; Faha-25 taona nisahanana fampianarana [...]
Ho antsika Kristiana Eto amin’ny FJKM Avaratr’Andohalo Ry havana, Ny Biraon’ny Fiangonana no mamangy antsika rehetra. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanan’ny Tompo. Niarahantsika nandre ny fanambarana sy fandaminana nataon’ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, tamin’ny [...]
Ny Fitandremana no ambaratongan-drafitra fototra ato amin’ny FJKM. Ny Foto-dalana andininy faha-15 dia mamaritra ny Fitandremana ho toy izao: “Ny Fitandremana dia Fiangonana iray (1) na maromaro entin’ny Mpitandrina iray (1) araka ny fandaminana ataon’ny Komity [...]
Fotoana manan-tantara eo amin’ny Protestantisma ny 31 Okt 1517, ka araraotintsika izany ianarana mba hahafantarana bebe kokoa ny maha Protestanta sy ny foto-kevitra vitsivitsy ijoroany sy iavahany, amin’ity Alahady 30 Oktobra ity. Ny alin’ny [...]
Iza moa ireto Iraka ireto ? Teo amin’ny lafiny asa : Ny Mpitandrina RAMBOANJANAHARY RASOLONJANAHARY Samoelijaona dia talen’ny Sekoly Vinet Ambohimalaza sady mpampianatra taranja marika tao, avy eo izy dia mpampianatra [...]